लकडाउन ठोक्दियो आनन्दै : लकडाउनको विकल्प लकडाउनमात्र किन देखेको सरकारले? – MySansar
लकडाउन ठोक्दियो आनन्दै : लकडाउनको विकल्प लकडाउनमात्र किन देखेको सरकारले?
Posted on May 31, 2020 by Salokya
शनिबारको दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनतालाई आठौँ किस्ताको लकडाउन उपहार दिएको छ। सातौँ किस्ताको म्याद सकिन तीन दिन बाँकी छँदै किन हतारमा सरकारले लकडाउन थप्‍ने निर्णय गरेको हो, बुझिएन। आज ६९ औँ दिनसम्म लकडाउन बसेका सर्वसाधारण उकुसमुकुस भइसकेका छन्। देशको मात्र होइन हरेक व्यक्तिको र परिवारको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। गरी खान पाइएन अब कसरी खाने भन्ने भइसकेको छ। तर सुविधासम्पन्न घरमा बसेकाहरुले यो दुःख महसूस गर्न सकिरहेका छैनन्। र त, लकडाउनको विकल्प लकडाउन र मात्र लकडाउन देखिरहेको छ सरकारले। अरु केही गर्न परेन, लकडाउन ठोक्दियो आनन्द। क्वारेन्टिनमा मान्छे मरिरहेका छन्, संक्रमण लागेका मानिसलाई पहिचान गरेर, अरुबाट अलग राखेर, उपचार गर्नुपर्नेमा मरिसकेपछि बल्ल कोरोना लागेको घोषणा हुन्छ। मतलब छैन यसमा।
संयोगले आजै छिमेकी देश भारतले पनि लकडाउनको विषयमा नयाँ घोषणा गरेको छ। भोलिदेखि सकिन लागेको थियो त्यहाँको लकडाउन ४.०। अहिले हामीकहाँ भारतबाट आएकाहरुमा नै धेरै संक्रमण भेटिएको छ। त्यसैले पनि भारतको नीतिले हामीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।
भारत अहिले विश्वकै बढी संक्रमित फेला परेका देशको सूचीमा टप टेनमा परिसक्यो। मृत्युको संख्या पनि चीनलाई उछिनिसक्यो। तर पनि सधैँ लकडाउन उचित हुन्न भनेर त्यहाँको गृह मन्त्रालयले आज बिस्तारै खोल्दै जाने गरी चरणवद्ध योजनाको घोषणा गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा फोकस गर्दै अनलक १ घोषणा गरिएको छ। ८ जुनदेखि त्यहाँ धार्मिक स्थान र सार्वजनिक पूजास्थलदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, शपिङ मल निश्चित गाइडलाइन अन्तर्गत रहेर खोल्ने अनुमति दिइएको छ। दोस्रो चरणमा स्कूल/कलेज खोल्ने तयारी गरिएको छ। आन्तरिक हवाई सेवा त्यहाँ सुरु भइसकेको छ।
रातिको कर्फ्यु बाहेक दिनमा भारतभर एक राज्यबाट अर्को राज्यमा जान कतै रोक लगाइने छैन। योसँगै भारतबाट अझ सहज रुपमा नेपालीहरु स्वदेशका लागि निस्कने भएका छन्। संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा भने यस्ता गतिविधिमा छुट हुने छैन। त्यहाँ थप एक महिना अर्थात् जुन ३० सम्म लकडाउनको घोषणा गरिएको छ।
दक्षिण एसियामा धेरै संक्रमण देखिएको अर्को देश पाकिस्तानले पनि विभिन्न गतिविधि खुला गर्दै लगिसक्यो।
कोभिड-१९ छिट्टै नहट्ने निश्चित भइसक्यो। लकडाउनले मात्रै कोरोनासँग जुध्‍न नसकिने पनि निश्चित भइसक्यो। लकडाउननै सबै समस्याको समाधान हुने भए दोस्रो संक्रमण हुने बित्तिकै गरिएको लकडाउन आज ६९ दिन पुग्दासम्म १४ सय नाघ्ने र सात जनाको मृत्यु हुने थिएन। संक्रमित फेला परेका जिल्लाको संख्या ५० नाघ्ने थिएन।
अब सावधानी अपनाएर काममा फर्कनुको विकल्प छैन। सावधानीको अर्थ एक अर्काबीच भौतिक दूरी राखेर कुराकानी गर्ने, मास्क लगाउने, हात नमिलाउने, हात साबुन पानीले धोइरहने, बाहिर हुँदा आँखा, मुखमा हातले नछुने। संक्रमण धेरै देखिएका ठाउँहरु सिल गर्ने, जोखिम भएका र संक्रमण नदेखिएका ठाउँहरुमा बिस्तारै केही गतिविधिहरु खुला गर्दै लाने।
त्यसो त यस्तो तयारी भएको पनि हो भन्छन्। एउटा डकुमेन्ट अलि अगाडि नै सोसल मिडियामा निकै आएको थियो- न्यून जोखिम हरियो, सामान्य जोखिम पहेँलो र उच्च जोखिम रातोमा गर्न दिने क्रियाकलाप भन्दै
तर त्यस्तो केही घोषणा भएन। वैशाख २४ गते केही औद्योगिक गतिविधिमा छुट दिने निर्णय सरकारले गर्‍यो।
त्यसको भोलिपल्ट सडकमा जाम भएको फोटो पनि हामीले मिडियामा देख्न पायौँ। तर जेठ ३ गते कोरोनाबाट पहिलो मृत्यु भएको खबरसँगै लकडाउन अझ कडा पारियो। त्यो लकडाउन अझै कायमै छ।
अहिले पनि विज्ञहरुले यस्तो मोडलको लकडाउनले हुन्न भनेर सुझाव दिएको दियै छन्। तर विज्ञको सुझाव सुन्ने कसले?
लकडाउन तेस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ। यो बीचमा कयौँको रोजगारी गुमेको छ। टेम्पो, ट्याक्सी र बस चलाउनेहरु, होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र त्यसका कामदारहरु, अरु पसलेहरु र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरु…. सूची लामो छ- यी सबलाई कोरोना कहर बनेर आएको छ। उनीहरुले भोगेको समस्या महसूस गर्ने ह्रदय छैन सरकारको। लकडाउनको विकल्प के ? लकडाउन नै। लकडाउन सकिएपछि के ? थप लकडाउन बाहेक सरकारसँग कुनै योजना र नीति छ जस्तो देखिन्न।
पहिलो : चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ बिहान ६ बजेसम्म
भारतीय गृह मन्त्रालयको सूचना